Jenny zazakely jamba Horaisin’ny Ben’ny tanànan’Ivato an-tanana ny fampitana azy
Zazavavy kely vao dimy taona monja nanana olana ara-pahitana hatrany an-kibon-dreniny i Jenny kely.
Ao Mandrosoa Ivato izy ireo no mipetraka ary izy no voalohan-janak’ireo ray aman-dreniny. Teo amin’ny fahatelo volany anefa vao fantatr’izy ireo izany ka niezaka ny nampianatra azy tany amin’ireny sekoly mandray an-tanana ireny olona manana ara-pahitana ireny ireo nahitany masoandro. Mahatsiaro sahirana tanteraka izy ireo ankehitriny ka tsy manana fahafahana ny hanohy izany intsony. Horaisin’ny Ben’ny tanànan’Ivato Penjy Randrianarisoa ny fampianarana azy any amin’ny sekolin’ny jamba any Antsirabe manomboka izao. Izy avokoa no hiantoka ny lany rehetra mandrapahafak’i Jenny kely ny fanadinana Bakalôrea. Raha ny fantatra , efa nianatra ihany i Jenny teo aloha. Efa nahay nanoratra kely izy saingy tsy araka ny saram-pianarany isam-bolana. Tsiahivina fa efa asa soa fanaon’ity Ben’ny tanàna ity ny fitsinjovana ireo mponin’Ivato tahaka izao, indrindra fa ireo niangaran’ny vintana sy ireo tena sahirana.